Bit By Bit - Kucherechedza maitiro - 2.5 Mhedziso
Big date kwose kwose, asi kurishandisa uye nezvimwe observational mashoko nokuda chinzvimbo tsvakurudzo kwakaoma. In ruzivo rwangu pane chinhu chakafanana hapana akasununguka zvemasikati pfuma pakutsvakurudza: kana mukasandizivisa kuisa basa rakawanda achiunganidza data, ipapo muri pamwe kuenda kuti aiswe basa rakawanda analysing mashoko enyu kana kufunga zviri mubvunzo anonakidza kubvunza pamusoro mashoko. Zvomumusoro muchitsauko chino, ndinofunga kuti pane nzira nhatu dzinonyanya kuti guru mashoko manyuko zvichava chinokosha nokuda evanhu tsvakurudzo:
empirically adjudicating pakati wokukwikwidzawo yokungotaura zvakafanotaurwa. Mienzaniso basa mhando iri vanosanganisira Farber (2015) (New York Taxi vatyairi) uye King, Pan, and Roberts (2013) (kusenza mu China)
nani munzanga kuyerwa kuti mutemo kuburikidza nowcasting. Muenzaniso basa mhando iri Ginsberg et al. (2009) (Google flu Trends).
kupima causal migumisiro vane dzinongoitika kuedza uye enzanirana. Mienzaniso basa. Mhando iri Mas and Moretti (2009) (dzinotozvidawo KUENDERANA negoho) uye Einav et al. (2015) (mugumisiro pokutangira mutengo pamusoro Auktionen pana eBay).
Vakawanda mibvunzo inokosha munzanga tsvakurudzo raigona kuratidzwa somumwe izvi zvitatu. Zvisinei, nzira iyi kazhinji zvinoda vanotsvakurudza kuunza Mujenya mashoko. Chii chinoita Farber (2015) dzinonakidza ndiyo yokungotaura kukurudzira nokuyerwa. Izvi yokungotaura kurudziro inobva kunze mashoko. Saka, vaya vakanaka pane kubvunza mamwe mibvunzo yokutsvakurudza, hombe mashoko anogona chakaorera.
Pakupedzisira, pane dzidziso-kutinhwa empirical tsvakurudzo (iyo yave pfungwa pamusoro chitsauko chino), tinogona pafiripi ari manyorero nokusika empirically-rwakadzokera theorizing. Kuti, kuburikidza nokungwarira kuunganidza zvinhu empirical, maitiro, uye Puzzles, tinogona kuvaka itsva pfungwa.
Izvi zvingaitwa, mashoko-kutanga yokutaura dzidziso haisi itsva, uye rakanga zvikuru anokomekedza articulated kubudikidza Glaser and Strauss (1967) pamwe kudanwa kwavo makateyiwa dzidziso. Date-kutanga iyi nzira Zvisinei, hazvirevi "kuguma pfungwa," sezvo kwave kwakauraya nokuda yakawanda nhau kunhivi pakutsvakurudza mune digitaalinen zera (Anderson 2008) . Asi, sezvo mashoko kwezvakatipoteredza kuchinja, tinofanira kutarisira apiwa BALANCInG ari ukama pakati dzidziso uye mashoko. Munyika umo mashoko muunganidzwa kwaidhura, zvine musoro kuti chete kuunganidza mashoko kuti dzidziso dzinoti zvichava zvikuru kubatsira. Asi, munyika umo yakawanda mashoko ndivo vatova dziripo for free, zvine musoro kuti kuedzawo kuva date-kutanga nzira (Goldberg 2015) .
Sezvo Ndakauyisa muchitsauko chino, vatsvakurudzi vanogona kudzidza zvakawanda nokuona vanhu. Munyaya inotevera zvitsauko zvitatu, Ndichaenda kutsanangura sei Tingadzidza zvinhu zvakawanda uye zvakasiyana kana isu titaure zvedu date muunganidzwa uye kushamwaridzana nevanhu vakawanda zvakananga achivabvunza (Chapter 3), achimhanya kuedza (Chapter 4), uye kunyange chokuita navo vari pakutsvakurudza kwacho zvakananga (Chapter 5).